सिँचाइ नपाएर लाखौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै, करोडका गाडी किनेर बाँड्छ सिँचाइ विभाग
काठमाडौं – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले गत वर्ष जारी गरेको श्वेतपत्र अनुसार देशमा कुल १७ लाख ६६ हजार हेक्टर सिँचाइयोग्य जमिनमध्ये १४ लाख ३३ हजार २८७ हेक्टरमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।
सिँचाइ पुगेका मध्ये एकतिहाइ जमिनमा मात्र वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने गरेको छ । तर जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको ध्यान भने महङ्गा–महङ्गा गाडी खरिद गरी प्रयोग तथा वितरण गर्नमै केन्द्रित रहेको देखिएको छ । यहाँसम्म कि विभागले मन्त्रालयदेखि मन्त्रीका आसेपासेसम्मलाई गाडी बाँड्न भ्याएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणबाट ३ वटा गाडी लिएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले सचिवालयका लागि भन्दै सिँचाइ विभागबाट थप २ वटा गाडी लिएका छन् । मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको एक सहित उनको प्रयोजनमा रहेको गाडीको संख्या ६ पुग्छ ।
प्राधिकरणबाट लिएका ३ मध्ये २ गाडी सचिवालयकै नाममा छ । सिँचाइ विभागबाट लिएका सहित पुनले सचिवालयको नाममा लिएका गाडीको संख्या ४ छ । यसका अलावा प्राधिकरणको बा१३च ५७९३ नम्बरको प्राडो र मन्त्रालयको बा२झ १३७७ नम्बरको टक्सन गाडी मन्त्री पुनको व्यक्तिगत प्रयोगमा रहेको देखिन्छ ।
सिँचाइ विभागको बा१झ ६०१८ नम्बरको पिकअप तथा बीएए ४६४३ नम्बरको फोर्ड कार मन्त्री पुनले सचिवालयका लागि भन्दै सिँचाइ विभागबाट लिएका छन् । यस्तै विद्युत् प्राधिकरणबाट लिएको बा१ञ २४५२ नम्बरको प्राडो र बा२०च ४१५ नम्बरको इलेक्ट्रिक कार मन्त्री पुनको सचिवालयले प्रयोग गर्दै आएको देखिन्छ ।
करोडका गाडी किन्दै, बाँड्दै !
विभागले गत असारमा एक करोड २० लाख ९१ हजार रुपैयाँमा फोर्ड इन्डिहेभर जीप किनेर मन्त्रालयलाई पठायो । त्यसको एक वर्षअगाडि अर्थात् २०७४ सालमा विभागले सोही ब्राण्डका ५ वटा गाडी एक करोड २० लाख ७५ हजारका दरले किन्यो । त्यसमध्ये एक गाडी दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा रहेको देखिन्छ भने अर्को एक गाडी विभागमै पुलमा र अन्य ३ वटा गाडी उपमहानिर्देशकत्रय शिशिर कोइराला, कृष्ण बेल्बासे र बासुदेव लोहनीले चढ्दै आएका छन् । महानिर्देशक सरिता दवाडीले १ करोड १६ लाख पर्ने टोयटा फर्चुनर जीप चढ्ने गरेकी छन् ।
मन्त्रालयमै पठाइएको बा१झ ४७२५ नम्बरको मित्सुविसी पजेरो र मन्त्रीको सचिवालयलाई दिइएका दुई गाडीको मूल्य हामीलाई विभागले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छैन ।
५९ मा १५ गाडी प्रयोगविहीन
विभागमा रहेका कुल ५९ मध्ये १५ वटा गाडी प्रयोगविहीन छ । झण्डै सवा करोडमा किनिएको बा२झ ३१४० नम्बरको फोर्ड इण्डिहेभर जीप दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा छ । यस्तै अन्य ८ वटा गाडी मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा र ६ वटा गाडी कामै नलाग्ने अवस्थामा रहेकाले लिलाम गर्नुपर्ने विभागले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ ।
हेर्नुहोस्, चारपांग्रे सवारीको विवरणः
६७ वटा दुईपांग्रे, क–कसले चढ्छन् ?
विभागको स्वामित्वमा मोटरसाइकल र स्कूटर गरी ६७ वटा दुईपांग्रे सवारी साधन रहेको देखिन्छ । त्यसमध्ये २ वटा मर्मत गर्नुपर्ने र एउटा लिलाम गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको विभागले जनाएको छ ।
हेर्नुहोस्, दुईपांग्रे सवारीको विवरण:
कसले कति लिन्छन् इन्धन ?
विभागले अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७० र नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आन्तरिक कार्यप्रणली निर्देशिका २०७१ बमोजिम इन्धन उपलब्ध गराइँदै आएको जनाएको छ ।
सचिव तहका लागि मासिक १०० लिटर, सह–सचिव तहका प्रयोगकर्ताका लागि ७२ लिटर, शाखाको प्रयोजनमा रहने गाडीलाई मासिक ५० लिटर र दुई पांग्रे सवारीका लागि १० लिटर इन्धन उपलब्ध गराउँदै आएको विभागले जनाएको छ ।
थप आवश्यक परेमा स्वीकृत माग फारमका आधारमा इन्धन उपलब्ध गराउँदै आएको विभागले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ ।
हेर्नुहोस् शृंखलाका १४ भाग :-
नयाँ गाडी मर्मतमा अचाक्ली खर्च, १ वर्षमै आधा करोड भ...